IBentley Systems imemezela ukutholwa kwe-SPIDA - Geofumadas
IBentley Systems Imemezela Ukutholwa kwe-SPIDA
NgoJuni, 2021 Geospatial - GIS, Ubunginiyela, Innovations
Ukutholwa kweSoftware ye-SPIDA
IBentley Systems, Incorporate (Nasdaq: BSY), inkampani yesoftware yobunjiniyela bengqalasizinda, imemezele namuhla ukutholwa kwe-SPIDA Software, abathuthukisi besoftware ekhethekile yokwakhiwa, ukuhlaziywa nokulawulwa kwezinhlelo zezinsiza. Isungulwe ngo-2007 eColumbus, e-Ohio, i-SPIDA inikeza izixazululo zesoftware yokumodela, yokulingisa neyokuphatha idatha yezinkampani zikagesi nezokuxhumana kanye nabahlinzeki bezinsizakalo zobunjiniyela e-US nase Canada. Ukuhlanganiswa kwe-SPIDA ngaphakathi kwe-software ye-Bentley's OpenUtilities yobunjiniyela kanye nezinsizakalo zamafu enethiwekhi yedijithali kuzosiza ukubhekana nezinselelo zokushintshela emithonjeni emisha yamandla avuselelekayo, kufaka phakathi ukukhokhiswa kwezimoto zikagesi, ukusetshenziswa ngokuhlangene kwezinsika ukuxhasa ukunwetshwa kwe-5G kwamanethiwekhi we-broadband kanye nesimanje, futhi ukuqina kwegridi yamandla ukugcina ukuthembeka nokuqina.
Amawele edijithali angahlinzeka ngezinsiza ngezethulo ezicwilisiwe nezakhiwe ngobunyoninco zezimpahla zokudlulisa nokusabalalisa, ukuhlanganisa ama-smart grids kanye nokuhlaziywa kwesakhiwo ne-3D kanye ne-4D ngokoqobo njengoba kusebenza. Izixazululo ezingamawele ze-Bentley's OpenUtilities network network zinika amandla opharetha nabakhiqizi ukuthi bahlole ama-tradeoffs namathuba enethiwekhi, manje ahlanganisa imithombo yolwazi yendabuko, evuselelekayo kanye namandla. Njengoba behlinzeka ngezinsizakalo ukuhlangabezana nezidingo. Amawele edijithali akhuthaza ukuphathwa kwempahla ngokuguqula i-IT, i-OT, ne-ET (imodeli yobunjiniyela kanye nokulingisa) ukuze kusizakale imithombo yedatha yengqalasizinda kanye nezibikezelo zokuqagela ukwenza ngcono ukuphepha, ukusebenza nokuthembeka. Ngokwengezwa kwe-SPIDA, ukufinyelela kwamawele edijithali enethiwekhi manje kunganwetshwa kuzakhiwo zezinsiza namanethiwekhi, ukuhlinzeka "ngemayela lokugcina" elisengcupheni yezemvelo yengqalasizinda ebaluleke kakhulu yamandla nokuxhumana okubalulekile.
Izinkampani ezihola phambili zezinsiza zikagesi, kufaka phakathi i-Ameren, i-EPCOR, iNashville Electric Service (NES), kanye neSouthern California Edison (SCE), baklama ukusebenza kahle nokuqina kwezinhlelo zabo ezingaphezulu besebenzisa isoftware ye-SPIDA. Izixazululo ze-pole zokusetshenziswa ze-SPIDA zifaka phakathi i-SPIDAcalc ukubamba, ukumodela nokwandisa ukwedlula ngaphezulu kwempahla nokusabalalisa izimpahla zemithwalo yesakhiwo. I-SPIDAsilk ukuhlaziya ukugoba ikhebula nokwakhiwa kokungezwani kwezakhiwo zomzimba nezemvelo ukuze kufakwe umqhubi onembile nokungezwani kwekhebula; kanye ne-SPIDAstudio, ipulatifomu esuselwa emafini elandelela futhi ilawule isimo sezimpahla nesimo somzimba sezinhlelo zomoya.
Njengoba ukwanda okusheshayo kwemithombo yamandla evuselelekayo kuqhubeka futhi kunesidingo esandayo sokusetshenziswa kwezimoto zikagesi, ingqalasizinda yethu yenethiwekhi iyagcwala ngokweqile, kanye nokusatshalaliswa kwe-broadband enikwe amandla i-5G, izinsika zezinsizakalo Izethameli zenethiwekhi zibaluleke kakhulu kwingqalasizinda eqhubekayo, "kusho u-Alan Kiraly, iphini likamongameli omkhulu, ukusebenza kwenethiwekhi nempahla, iBentley Systems.
Ukutholwa kwe-SPIDA Software, yize kungabalulekile emiphumeleni yezezimali kaBentley, kuzokwengeza ozakwabo abangama-26 eNyakatho Melika. Abeluleki be-Mile 7 beluleke abaphathi be-SPIDA kanye nabaninimasheya ngokuthengiselana.
Umbono wethu nge-SPIDA bekulokhu ukuhlinzeka ngesixazululo esiphelele futhi esivulekile sokugcina nokwenza ngcono impilo kanye nobuqotho bezimpahla zengqalasizinda yamandla nokuxhumana yabasebenzisi bethu. Ngaphakathi kwethimba le-Bentley, silangazelela ukusheshisa izixazululo ze-Grid Digital Twin, ezisebenzisa ubuchwepheshe bethu besizinda somkhakha futhi ezibandakanya ukuhlaziywa kwesakhiwo se-SPIDA. Abasebenzisi be-SPIDA bamanje nabesikhathi esizayo bangabheka phambili ngokuzethemba ekusebenziseni amawele enethiwekhi edijithali njengoba ethuthukisa, eguqula, enweba futhi ephatha amasistimu awo asemoyeni. UBrett Willitt, uMongameli weSoftware Software
Ngenxa yalokhu kutholwa okusha kwe-Bentley Systems ukwenza ngcono ukusebenza nokumelana nenethiwekhi yayo, ihambisana nezinsizakalo zefu zamawele we-digital (DT) -Open Utilities- anikezwe yileli giant giant. Lokhu kuhlanganiswa kwemibono kanye nokuhlelwa kwendlela yokusebenza kwezinqubo kuvumela ukubhekana nezinselelo ezintsha ezihambisana namandla ahlanzekile / avuselelekayo, kanye nokwenza ngcono ukuhlaziywa kwezinhlaka zezinto zokusebenza eziphathelene nezinsizakalo zomphakathi.
I-Bentley iya ngokuya incika kubuchwepheshe ekuthuthukiseni isikhala okuphelele nokusimeme. Ukubaluleka kokuthuthuka kwalolu hlobo ukuba nengqalasizinda ekahle yokuthunyelwa kanye nokuxhumeka okulungile kwazo zombili izinsizakalo ze-5G nokuqiniswa kwamanethiwekhi kagesi nokuqina kwawo ngokuhamba kwesikhathi. Izinqumo ezihlakaniphile zeBentley System zikhonjisiwe ekukhuphukeni kwentengo yamasheya kusukela ngonyaka odlule. Okukhombisa ukuthi lizoqhubeka nokukhula futhi liguquke njalo, liguqule izixazululo zalo zibe yiqiniso lale nguquko yesine yezimboni.
Sijabule ukwamukela ozakwethu abasha abavela kwa-SPIDA kuye kuma-Bentley Systems nase-OpenUtilities, futhi sibheke phambili ekuqhubekeni nokuhlanganisa nokwenza isoftware ye-SPIDA, esivele yaziwa njengonjiniyela bokuhambisa amandla abangenasisekelo emsebenzini wabo obalulekile ukwenza ngcono ukusebenza kwenethiwekhi nokuqina. . »U-Ian Kiraly, iphini likamongameli omkhulu, ukusebenza kwenethiwekhi nempahla, iBentley Systems.
Mayelana ne-Bentley Systems
IBentley Systems (Nasdaq: BSY) yinkampani yesoftware yobunjiniyela bengqalasizinda. Sinikezela ngesoftware yokuthuthukisa ingqalasizinda yomhlaba, ixhasa umnotho womhlaba kanye nemvelo. Izixazululo zethu zesoftware ezihola phambili embonini zisetshenziswa ngochwepheshe nezinhlangano zabo bonke osayizi ekwakhiweni, ekwakhiweni nasekusebenzeni kwemigwaqo namabhuloho, ojantshi nezokuthutha, amanzi namanzi angcolile, imisebenzi yomphakathi nezinsiza, izakhiwo namakhampasi kanye nezikhungo zezimboni. Iminikelo yethu ifaka izicelo ezenzelwe iMicroStation yokumodela nokulingisa, iProjectWise yokulethwa kwephrojekthi, i-AssetWise yenethiwekhi nokusebenza kwempahla, nengxenyekazi ye-iTwin yamawele edijithali engqalasizinda. I-Bentley System isebenzisa ozakwabo abangaphezu kuka-4000 futhi ikhiqiza imali engenayo yonyaka engaphezu kwezigidi ezingama- $ 800 emazweni ayi-172. www.bentley.com
Bentley Systems I-Geospatial I-Geospatial
Thumela Previous«Langaphambilini AMA-AMERICA WOKUHAMBA NGOKWEZOKUTHENGISA
Post Next INFRAWEEK 2021 - ukubhalisa kuvuliweOkulandelayo »
I-PTC CREO Course Parametric - Idizayini, ukuhlaziywa nokulingiswa (2/3)
ICreo Parametric yisoftware yokwakha, yokukhiqiza neyonjiniyela ye-PTC Corporation. Kuyisoftware evumela ukumodeliswa, ...
Izisekelo zesifundo se-Architecture zisebenzisa iRevit
Konke odinga ukukwazi mayelana ne-Revit yokwakha amaphrojekthi ezakhiwo Kule nkambo sizogxila ekukunikeni ...
Isakhiwo Sobunjiniyela Bezakhiwo sisebenzisa iRevit
Umhlahlandlela wokuqamba owusizo neNokwakha Imininingwane Model ehlose ukwakhiwa kwesakhiwo. Dweba, dweba futhi ubhale ...